2। Liraglutide संरचना
3। Liraglutide संकेत
4। कार्यको Liraglutide संयन्त्र
5। Liraglutide को खुराक र प्रशासन निर्देश
6। Liraglutide का कस्ता फाइदाहरू छन्?
7। तपाईंले निम्न साइड इफेक्ट / चेतावनीको ख्याल राख्नुपर्दछ जब Liraglutide प्रयोग गर्नुहुन्छ
8। Liraglutide अन्तर्क्रिया
9। क्लिनिकल अनुभव
Liraglutide (204656-20-2) विश्वको विभिन्न भागहरूमा बिभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा बेच्ने औषधि हो, जुन विभिन्न चिकित्सीय उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। आज बजारमा सब भन्दा सामान्य Liraglutide ब्रान्ड नामहरू भिक्टोजा र सक्सेन्डा हुन्। Liraglutide को उपयोग तपाईले किन्नु भएको ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि, भिक्टोजा प्रायः वयस्कमा रगतमा चिनी नियन्त्रण बढाउनको लागि उचित व्यायाम र डाइटको साथ प्रयोग गरिन्छ र कमसेकम १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा2मधुमेह मेलिटस टाइप गर्नुहोस्। थप रूपमा, भिक्टोजा मुटु सम्बन्धी जोखिमहरू कम गर्न पनि महत्वपूर्ण साबित भएको छ जस्तै हृदय रोगहरू र वयस्कहरूको हृदय रोगको जोखिम कम गर्न2मधुमेह।
अर्कोतर्फ, सक्सेन्डाजुन अर्को लिराग्लुटाइड ब्रान्ड पनि हो, उचित स्वास्थ्य र व्यायामको साथ प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाबाट पीडित तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। एक Liraglutide ब्रान्ड नाम भए पनि, सक्सेन्डा प्रकार 1 वा टाइप दुई मधुमेह को उपचार को लागी प्रयोग गरीरहेको छैन, र यो एक भूख दबाउने वा वजन घटाउने पूरक होईन। तपाईंको डाक्टरले पनि सिफारिस गर्न सक्छ Liraglutide प्रयोग गर्दछ यस गाइडमा समावेश नभएको अन्य कारणहरूका लागि। जे होस्, राम्रो सल्लाहको लागि तपाईको डाक्टरबाट जहिले पनि सही Liraglutide खुराक लिन सल्लाह दिइन्छ।
Liraglutide बिक्री को लागी विभिन्न अनलाइन स्टोर र भौतिक फार्मेसीहरु मा उपलब्ध छ, तर तपाईं सधैं आफ्नो स्रोतको बारे सावधान हुनुपर्छ। तपाईको औषधि विश्वसनीय र अनुभवी विक्रेताबाट पाउनुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्न सँधै उचित अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले लिनुहुने औषधिको गुणस्तरले असर पार्छ परिणामहरू चक्रको अन्तमा तपाईंले अनुभव गर्नुहुनेछ। Liraglutide लागत एक स्रोतबाट अर्कोमा फरक पर्न सक्छ तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उत्तम गुणवत्ता पाउनुहुन्छ। यदि तपाईं श्रोतको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न भने आफ्नो मेडिसिसको परामर्श लिनुहोस्।
2. Liraglutide संरचना
रासायनिक, Liraglutide संरचना एन्टिहाइपरग्लिसेमिक क्रियाकलापको साथमा subcutantly प्रशासित एक लामो-अभिनय फैटी acylated ग्लूकागन-जस्तो पेप्टाइड बनेको छ। औषधिको लामो कार्य फ्याटी एसिड, र पाल्मिटिक एसिड संलग्नको परिणाम हो GLP-1, जुन सजिलै एल्बमिनसँग बाँधिन्छ। एक पटक तपाइँले तपाइँको खुराक लिनुभयो भने, र Liraglutide लाई तत्काल गिरावटबाट बचाउन एल्बमिन बाइन्डि aले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, र यसको परिणाम स्वरूप यसले GLP-1 को एक स्थिर र ढिलो रिलीजमा पुर्‍याउँछ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईले छोटो समयमा सम्भव परिणाम प्राप्त गर्नुभयो।
एफडीएले विक्टोजा र सक्सेन्डा दुबैलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिभिन्न चिकित्सा अवस्थाको उपचारका लागि अनुमोदन गरेको छ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार भिक्टोजा हृदय समस्याहरूको उपचार र2मधुमेह टाइपको लागि अनुमोदित भएको छ। यो जठरांत्र सम्बन्धी लक्षणहरू जस्तै बान्ता, मतली, र पखाला कम गर्नका लागि पनि परिचित छ। सकसेन्डा पनि मोटाई र शरीरको वजन नियन्त्रण को उपचार मा सहयोग गर्न एफडीए द्वारा अनुमोदित भएको थियो। Liraglutide लिनुपर्दछ जब तपाई मुटु सम्बन्धी समस्याहरू कम गर्न चाहानुहुन्छ जुन मुटुको रोग वा टाइप2मधुमेह मेलिटसको परिणामस्वरूप हुन्छ। साथै, यदि तपाइँ2मधुमेह प्रकारको परिणामस्वरूप तपाइँको शरीरको वजन नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ, Liraglutide मोटापा तपाईको लागि एक उत्कृष्ट औषधि हुनेछ। Liraglutide मोटापा धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको तौल प्रबन्ध गर्न पनि मद्दत गरेको छ। तपाईले लिराग्लुटाइड पाउडरको साथ उपचार गर्न सक्ने लक्षणहरुको अनुभव गर्नु भए पनि स्वास्थ्य पेशेवरसँग परामर्श नगरी औषधि नलार्नुहोस्। यद्यपि यो कुरा नबिर्सनुहोस् कि यस लेखमा सूचीबद्ध नभएको कुनै पनि अन्य मेडिकल अवस्थाको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन तपाईंको चिकित्सकले पनि यो औषधि लिख्न सक्नुहुन्छ।
4. कार्यको Liraglutide संयन्त्र
धेरै अवस्थाहरूमा, Liraglutide काम गर्दछ तपाईं खुराक चक्र को अन्त गरेर के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरण को लागी, वजन को लागी Lraglutide खुराक लिने मान्छे को लागी Liraglutide को कार्यविधि2मधुमेह प्रकार को उपचार को लागी लिने प्रयोगकर्ताहरु भन्दा फरक छ। दुई Liraglutide ब्रान्ड नामहरू भिक्टोजा र सक्सेन्डा एक पटक ती तपाईंको शरीर प्रणालीमा प्रवेश एक फरक तरीकाले।
उदाहरण को लागी, Liraglutide मोटापा (सक्सेन्डा) तपाइँको शरीर मा भूख हार्मोन (ग्लुकागन-जस्तै-पेप्टाइड वा GLP-1) को उत्पादन दबाएर काम गर्दछ, जसले तपाइँको भोकलाई नियन्त्रण गर्दछ। जुन क्षण GLP-1 उत्पादन तल जान्छ, तपाईंको भोक तल जान्छ र कम क्यालोरीहरू खानेछ, र लामो समय मा, तपाईंको शरीरको वजन कम गर्दछ। क्यालोरीहरू तपाईंको बृद्धि भएको शरीरको वजनको लागि जिम्मेवार छन्, र यदि तपाईं तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ, भने तपाईंलाई केही पाउन्ड बहाल्न सजिलो हुनेछ।
अर्को तर्फ, भिक्टोजाले औषधि निर्माताले दिएका नतिजाहरुलाई पुर्‍याउन तीन फरक तरिकाले कार्य गर्दछ। पहिले, भिक्टोजाले पेटलाई छोड्ने खानालाई कम गर्दै काम गर्दछ, जसले तपाईंको शरीरमा रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्दछ। जबकि उस्तै संयन्त्र, औषधीले तपाईंको कलेजोलाई धेरै चिनी उत्पादन गर्नबाट रोक्छ। अन्तमा, लीराग्लुटाइड, जो भिक्टोजामा प्रमुख घटक हो, तपाईंको पन्क्रियाजलाई पनि बढि इन्सुलिन उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ जब रगतमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ। औषधिले यी सबै गतिविधिहरूलाई बीटा सेलको प्रभावकारिता बढाउँदै वृद्धि गर्दछ। कक्षहरूले ईन्सुलिन मुक्त गरेर रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ, जसले तपाईंको शरीर प्रणालीमा चिनीको स्तर बेअसर गर्दछ। तपाईको शरीरमा इन्सुलिन उत्पादनको उत्तेजना मुख्य कारण हो जुन भिक्टोजा मुख्यतया उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ2मधुमेह टाइप mellitus
5. Liraglutide को खुराक र प्रशासन निर्देश
Liraglutide प्रयोग गर्दछ स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारको आधारमा एक प्रयोगकर्ताबाट अर्को फरक फरक हुन्छ। औषधिको खुराक उपचार उपचार भैरहेको आधारमा एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा सेट गर्नुपर्दछ। १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई यो औषधि सेवन गर्न सल्लाह दिइदैन, किनकि यसले उनीहरूलाई गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा उजागर गर्न सक्छ। मानव शरीरहरू पनि फरक हुन्छन्, र यसैले यो कुनै सल्लाह लिनु अघि मेडिकल जाँच गर्न सल्लाह दिइन्छ। यद्यपि Liraglutide निर्माता द्वारा सुझाव गरिएको खुराक निर्देशनहरूको साथ आउँदछ, कहिलेकाँही यसले तपाईंको लागि काम नगर्न सक्छ। डाक्टर एक मात्र सही व्यक्ति हो जसले तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण गरिसके पछि तपाईंको लागि सही Liraglutide खुराक सेट गर्दछ।
Liraglutide एक इंजेक्शन ड्रग हो कि तपाइँको माथिल्लो पाखो, पेट, वा फिला मा प्रशासित हुनु पर्छ। तपाईको Liraglutide डोज लिनको लागि त्यहाँ कुनै खास सेट समय छैन, तर तपाईं यसलाई खानपान बिना वा लिन सक्नुहुनेछ। तपाई सधैं लिराग्लुटाइडे इन्जेक्शन साइटहरू घुमाउन सक्नुहुनेछ साइड इफेक्ट वा पीडा जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। डोज प्रशासन समय सेट खुराक समायोजन बिना आरामથી परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सबैलाई निरीक्षण गर्न यो सल्लाह दिइन्छ Liraglutide इंजेक्शन नेत्रहीन समाधान केवल रंगहीन, स्पष्ट छ, र कुनै पनि दृश्य कणहरू छैन जब तपाईं मात्र आफ्नो इंजेक्शन लिन पर्छ। यदि तपाईंको समाधानले कुनै असामान्य र color्ग विकास गर्दछ भने, यसलाई आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श नगरी लिनुहोस्।
Liraglutide पाउडर खुराक तपाईंको शरीर सहनशीलता, उमेर र स्वास्थ्य अवस्था उपचार गरीरहेको छ।
प्रारम्भिक Liraglutide पाउडर (204656-20-2) खुराक वयस्कहरूको लागि 0.6mg हो, जुन एक हप्ताको लागि प्रति दिन एक पटक लिनु पर्छ। एक हप्ता पछि, खुराक 1.2mg subcutaneously प्रति दिन एक पटक समायोजित गर्न सकिन्छ, र यदि तपाईं रोग नियन्त्रण प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाईंको डाक्टरले खुराक दिन प्रति दिन 1.8mg गर्न सक्छन्। Liraglutide रखरखाव खुराक प्रति दिन 1.2 र 1.8 मिलीग्राम बीचमा हुनुपर्दछ। जे होस्, अधिकतम खुराक प्रति दिन 1.8mg हो।
प्रति दिन 0.6mg प्रारम्भिक खुराक उपचार थालनीबाट उत्पन्न जठरांत्र सम्बन्धी लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि हो र ग्लाइसेमिक नियन्त्रणको लागि पर्याप्त पर्याप्त हुन सक्दैन। जे होस्, लीराग्लुटाइड ईन्सुलिन विकल्प होइन र 1 मधुमेह मेलिटस वा डायबेटिक केटोआसिडोसिस प्रकारको बिरामीहरूले लिनु हुँदैन। जब तपाईं यो थेरीपी शुरू गर्नुहुन्छ, हाइपोग्लाइसीमिया जोखिम कम गर्न इन्सुलिन सेक्रेटोगोग कम गर्ने विचार गर्नुहोस्।
हृदय जोखिम न्यूनीकरण
कार्डियोवास्कुलर समस्या भएका वयस्कहरूको लागि शुरुका Liraglutide खुराक प्रति दिन 0.6mg हो र पहिलो हप्ताको लागि लिनुपर्दछ। अर्को हप्तामा खुराक 1.2mg प्रति दिन बढाउनुपर्दछ, र यदि तपाइँ ग्लाइसेमिक नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाइँको डाक्टरले खुराक दिन प्रति दिन 1.8mg बढाउनु पर्छ। तर, समय द्वारा लिराग्लाटाइड पाउडर खुराक अधिकतममा बढाइन्छ, तपाईंले इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। रखरखाव खुराक प्रति दिन 1.2mg र 1.8mg बीचमा हुनुपर्दछ, जबकि अधिकतम वयस्क खुराक प्रति दिन 1.8mg हो।
वजन घटाउने वा मोटाई को लागी Liraglutide वयस्क खुराक
यो लीराग्लुटाइड वजन घटाउनु जठरांत्र संबंधी लक्षणहरू अनुभव गर्ने सम्भावनालाई कम गर्न डोज बृद्धिलाई पालन गर्नुपर्दछ। खुराक समायोजन राम्रो परिणामको लागि थप हप्ताको लागि ढिलाइ हुन सक्छ। यद्यपि तपाईको डाक्टरले तपाईलाई यस प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। यहाँ प्रारम्भिक खुराक 0.6 हो, जुन प्रति दिन एक पटक subcutomot लिनु पर्छ। दोस्रो हप्तामा, खुराक प्रति दिन 1.2mg गर्न सकिन्छ; तेस्रो हप्तामा, खुराक दिन प्रति दिन 1.8 बढाउन सकिन्छ। चौथो हप्तामा, खुराक पनि 2.4mg र पाँचौं हप्ता 3mg प्रति दिन एक पटक बढ्नु पर्छ। जहाँसम्म, तपाइँको डाक्टरले कहिले र कसरी खुराक सुधार गर्ने बारे मार्गदर्शन गर्दछ।
यहाँ रखरखाव खुराक प्रति दिन एकचोटि 3mg हो, तर यदि तपाईंको शरीरले यो सहन सक्दैन भने, डाक्टरले तपाईंलाई खुराक बन्द गर्न सल्लाह दिन सक्छ। यो औषधि प्रयोग गर्ने पुरानो तौल प्रबन्धन केवल उच्च खुराकको साथ प्राप्त गरिएको छ। मोटापामा, सक्सेन्डा लीराग्लुटाइड ब्रान्ड तौल प्रबन्धनमा महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ, र औषधि2मधुमेह प्रकारको उपचारको लागि प्रयोग गरिदैन। जे होस्, भिक्टोजा टाइप एक्सएनयूएमएक्स मधुमेह मेलिटस र हृदय समस्याहरूको उपचारको लागि परिचित छ।
Liraglutide इंजेक्शन खुराक केवल कम्तिमा दश वर्ष र माथिका बच्चाहरु द्वारा लिनु पर्छ। भन्दा कम कुनै बच्चाको लागि यो औषधि दिइनु हुँदैन उनीहरूले यो पेप्टाइडको साथ उपचार गर्न सक्ने लक्षणहरू देखाउँदा पनि। पेडियाट्रिक लिराग्लुटाइड खुराक स्वास्थ्य उपचारमा पनि निर्भर गर्दछ। सिफारिस गरिएको खुराकहरू निम्नानुसार छन्;
डायबिटीज प्रकार2का लागि बाल चिकित्सा खुराक
सिफारिश गरिएको प्रारम्भिक Liraglutide इंजेक्शन खुराक 0.6mg हो, जुन कम्तिमा एक हप्ताको लागि प्रति दिन एक पटक लिनु पर्छ। त्यस पछि, खुराक प्रति दिन 1.2mg गर्न सकिन्छ, र glycemic नियन्त्रण प्राप्त छैन भने, चिकित्सा अर्को हप्तामा 1.8 gm को मात्रा बढाउन सक्छ। डायबेटिस टाइप दुईको लागि अधिकतम पेडियाट्रिक खुराक प्रति दिन 1.8mg हो, जबकि मर्मत खुराक प्रति दिन 0.6mg बाट 1.8mg सम्म हुन्छ।
लीराग्लाइटाइड बच्चाहरूलाई बिरामी र कलेजो समस्या जस्ता विभिन्न स्वास्थ्य स्थितिको उपचारमा मद्दत गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ। यद्यपि यी दुई सर्तहरूको उपचार गर्दा तपाईले लिग्लुइडलाई सावधानीपूर्वक लिनु पर्छ किनभने यसले प्रयोग गर्दा गम्भीर दुष्प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ। लिगर वा रेनल मुद्दाहरूको लागि लिराग्लुटाइड पेप्टाइड लिँदा कुनै डोज समायोजनको सिफारिश हुँदैन। लीराग्लुटाइड डोज लिँदा हाइपोग्लाइसीमियाको जोखिम कम गर्न कुनै पनि इन्सुलिन सेवन कम गर्नुहोस्।
यदि म ओभरडोज हुन्छ भने के हुन्छ?
कुनै पनि औषधि ओभरडोज गर्नु राम्रो विचार होईन र लिईए पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन वजन घटाउन को लागी Liraglutide खुराक वा कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य अवस्था को उपचार। तपाईलाई सल्लाह दिइन्छ कि तपाईको डाक्टरले दिएको सल्लाह अनुशरणमा टाँस्नुहोस्। अत्यधिक मात्रा लिनुले गम्भीर दुष्प्रभावहरू निम्त्याउँछ, जसले तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थालाई बिगार्न सक्छ वा अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ। जहाँसम्म, कहिलेकाँही, ओभरडोजिंग दुर्घटना वा तपाईंको शरीरमा लागूऔषधको प्रतिक्रियाको परिणाम हुन सक्छ। सबै भन्दा सामान्य ओभरसिंग साइड इफेक्टमा गम्भीर मतली र बान्ता शामेल छ। जब तपाईले याद गर्नुभयो कि तपाईले सिफारिश भन्दा बढि डोज लिनु भएको छ, सकेसम्म चाँडो चिकित्सा सल्लाह लिनुहोला। तपाइँ आफ्नो डाक्टरलाई सहयोगको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
6. Liraglutide का कस्ता फाइदाहरू छन्?
धेरै बर्ष, Liraglutide विशेष गरी चिकित्सा दुनिया मा, बिभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्न को लागी साबित भएको छ। यद्यपि तपाई केवल अधिकतम अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ liraglutide फाइदा, यदि तपाइँ डोज निर्देशनहरू र उचित आहार वा व्यायाममा अडिनुभयो भने तपाइँको डाक्टरले सल्लाह दिए अनुसार। यहाँ केहि धेरै चिनिएका Liraglutide लाभहरु छन्।
प्रकार2मधुमेह बढ़ाउँदछ
Liraglutide ब्रान्ड नाम Victoza मधुमेह प्रकार2को उपचार को लागी एफडीए द्वारा प्रयोग गरी मान्यता प्राप्त गरीएको छ। औषधीले तपाईंको शरीरमा रगत चिनी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। जब तपाईको शरीरमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ, लीराग्लुटाइडले तपाईको अग्न्याशयलाई प्रोत्साहित गर्दछ अधिक इन्सुलिन एन्जाइम उत्पादन गर्न जुन रगत ग्लुकोजलाई बेअसर गर्न मद्दत गर्दछ।
मोटापा र शरीरको वजनसँग लड्न मद्दत गर्दछ
संयुक्त राज्य अमेरिकामा, एफडीएले मोटापाको उपचारको लागि लिराग्लाइटाइडलाई अनुमोदन गरिसकेपछि यसले भूखलाई कम गर्न र क्यालोरी सेवन गर्न प्रभावकारी प्रमाणित गर्‍यो जसले शरीरको वजन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍यायो। औसतमा, महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा लिराग्लुटाइड तौल घटाउने ले वजन घटाउने महत्वपूर्ण अनुभव गरे। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि पुरुषहरूले यस औषधिबाट फाइदा लिन सक्दैनन्। यस औषधिको साथ राम्रो वजन घटाउने अनुभवको लागि उचित खुराक र व्यायाम पनि खुराकको साथ हुनु पर्छ।
भास्कुलर प्रणालीलाई बचाउँछ
लिराग्लुटाइड तपाईंको मुटुको मांसपेशिहरूको रक्षा गर्न अनि हृदय रोगहरूको जोखिम कम गर्नका लागि आवश्यक साबित भएको छ। चिकित्सा अध्ययनले यो पनि देखाउँदछ कि लीराग्लुटाइड लिने, सुधार गरिएको हृदय रोगहरू जुन2मधुमेह प्रकार र मोटापाको प्रकारको परिणामस्वरूप हुन्छ। औषधीले तपाईंको रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न पनि मद्दत गर्दछ, जसले तपाईंको संवहनी स्वास्थ्यलाई बढावा दिन सहयोग गर्दछ।
यस औषधिले तपाईंको मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न, चिन्ता नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउन पनि सकरात्मक असर पार्ने पनि भनिएको छ, र यसले एक एंटी-अक्सीडन्ट र विरोधी भडकाउने पूरकको रूपमा काम गर्न सक्छ। अर्को चिकित्सा अध्ययनमा, लिराग्लुटाइडले देखाए कि यसले मानिसहरूलाई मदिराको दुर्व्यसनमा मद्दत गर्दछ। यद्यपि लीराग्लिटाइड ओभरडोजले तपाईंलाई स्वास्थ्य जटिलतामा पर्दाफास गर्न सक्छ र सबै अपेक्षित लाभहरू नष्ट गर्न सक्छ।
7. तपाईंले निम्न साइड इफेक्ट / चेतावनीको ख्याल राख्नुपर्दछ जब Liraglutide प्रयोग गर्नुहुन्छ
लगभग सबै ड्रग्स, जब दुरुपयोग वा प्रयोग गरीयो यसले तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा उजागर गर्न सक्छ, र लीराग्लुटाइड असाधारण छैन। जहाँसम्म, कहिलेकाँही साइड इफेक्टहरू तपाइँको शरीरले कसरी लिराग्लाइटाइड वजन घटाउने खुराकलाई प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने परिणामको रूपमा हुन सक्छ। केहि liraglutide चेतावनी सामान्य छन् र समयको साथ अदृश्य हुन्छन्, तर यदि निम्न प्रभावहरू समयसँगै हराउँदैनन् वा ती धेरै गम्भीर हुन्छन् भने, चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस्;
बहेको नाक, खोकी वा छींक लाग्ने
जलेको वा पेशाब गर्न कठिनाई
Liraglutide इंजेक्शन साइटहरु rednessor rashes
कब्ज र ईर्ष्या
त्यहाँ धेरै गम्भीर लिराग्लुटाइद चेतावनीहरू छन् जसलाई तत्काल मेडिकल हेरचाह आवश्यक हुन्छ एकपटक जब तपाईंले उनीहरूलाई अनुभव गर्न थाल्नुभयो, र तिनीहरूले समावेश गर्दछ;
क्ले रंगको स्टूलहरू
पहेंलो छाला वा आँखा
यदि तपाईं मार्न को लागी सोच्न को लागी, आफूलाई वा अरूलाई हानी गर्ने को लागी
मतली, फुलेको घाँटी, जिब्रो, अनुहार, आँखा वा मुख।
निल्न वा सास फेर्न कठिन छ।
यी गम्भीर लागि Liraglutide साइड इफेक्टतपाईलाई चिकित्सा सल्लाह लिने बित्तिकै डोज लिन बन्द गर्न सल्लाह दिइन्छ।
8. Liraglutide अन्तर्क्रिया
औषधि अन्तर्क्रियाले तपाईंको औषधीले कसरी काम गर्दछ असर गर्दछ वा तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्टको उच्च जोखिममा राख्न सक्छ। त्यसकारण, तपाईले लिराग्लुटाइड खुराक लिन थाल्नु अघि तपाईको डाक्टरलाई तपाईको औषधीमा रहेको कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन आवाश्यक हुन्छ। केहि औषधिहरू सँगै काम गर्न सक्दैनन्, र राम्रो छ तपाईंको डाक्टरलाई तपाईंले लिनुहुने कुनै पनि अन्य औषधिहरूको बारेमा जान्नु। सुरक्षित पक्षमा हुन, सुरू नगर्नुहोस्, डोज परिवर्तन गर्नुहोस् वा मेडिकल पेशेवरसँग परामर्श नगरी कुनै पनि औषधि सेवन गर्न रोक्नुहोस्।
तपाईलाई सल्लाह दिइन्छ कुनै पनि अन्य औषधीको साथ यो औषधि नलगाउनुहोस् जसले लीराग्लुटाइड समावेश गर्दछ किनकि यसले ओभरडोस गर्ने र गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा तपाइँलाई उजागर गर्न सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर गर्दै, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई सही प्रदान गर्दछ Liraglutide अन्तर्क्रिया परिणाम वृद्धि गर्न। त्यहाँ धेरै ड्रगहरू छन् जुन तपाईं लिराग्लाइटाइडसँग एसेटोहेक्सामाइड, अल्बुटेरोल, सिनोक्सासिन र डानाजोल जस्ता धेरै सँगै लिन सक्नुहुन्छ।
अनुसार liraglutide समीक्षा बिभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा, धेरै प्रयोगकर्ताहरू नतिजा लिइरहेको बेला वा पछि उनीहरूले उपभोग गरेका नतिजा र फाइदाहरूबाट सन्तुष्ट छन्। चिकित्सा अध्ययनले कसरी औषधी विभिन्न मोटाई, प्रकार2मधुमेह mellitus, गुर्दे समस्या र विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था को परिणामस्वरूप हृदय रोग को रोकथाम को रूप मा विभिन्न चिकित्सा अवस्था को उपचार मा उपयोगी भएको देखाउँदछ। लिराग्लिटाइड अन्तर्क्रिया पनि कमसेकम १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा मधुमेह प्रकार2को उपचारमा शक्तिशाली साबित भएको छ।
जे होस्, केहि प्रयोगकर्ताहरूले यस औषधिको साथ नराम्रो अनुभव गरेका छन्, तर त्यो Liraglutide अधिक मात्रा वा शरीर सहनशीलतालाई श्रेय दिन सकिन्छ। शुभ समाचार यो हो कि यदि तपाईंले राम्रै समयमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने लाइराग्लाइटाइड साइड इफेक्टहरू उल्टाउन सकिन्छ। यो औषधि लिँदा गम्भीर दुष्प्रभावको अनुभव गर्नबाट बच्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईले आफ्नो डोज सुरु गर्नु भन्दा पहिले मेडिकल परीक्षणको लागि जाँदैछ र चिकित्सकहरूलाई तपाईलाई सही डोज सेट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यो पनि सल्लाह निर्देशनहरू पालन गर्न र तपाइँले लिईरहनुभएको कुनै पनि अन्य औषधिको बारेमा आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्न सल्लाह दिइन्छ।
यो औषधी मेडिकल जगतमा अत्यावश्यक साबित भएको छ त्यसैले मोटापाको उपचारमा, टाइप एक्सएनयूएमएक्स मधुमेह र मुटु सम्बन्धी समस्याहरू, अन्यमा। Liraglutide पाउडर (204656-20-2) बिक्रीको लागि बिभिन्न अनलाइन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ, तर तपाईं यसलाई विभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा भेट्टाउनुहुनेछ सक्सेन्डा र भिक्टोजा जस्ता। जे होस्, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको अर्डर गर्नु अघि प्रत्येक ब्रान्डको लागि के प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नुभयो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, प्रत्येक liraglutide ब्रान्ड नाम एक विशेष उद्देश्यका लागि प्रयोग गरीन्छ। सक्सेन्डा वजन घटाउने र मोटापाको उपचारका लागि अनुमोदित छ जबकि विक्टोजा टाइप एक्सएनयूएमएक्स मधुमेह उपचारका साथै उच्च रक्त शर्कराको स्तरको कारण हृदय रोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि Liraglutide साइड इफेक्टको अनुभव हुनबाट रोक्नको लागि खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
तपाईको बारेमा उचित अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिइन्छ liraglutide खरीद तपाईंको खरीदहरू गर्नु अघि स्रोत। आज बजारमा धेरै पेप्टाइड विक्रेता छन्, तपाईंलाई गाह्रो बनाउने गुणस्तरको औषधि कहाँ पाउने भनेर थाहा पाउँदछ जुन तपाईंलाई प्रभावकारी परिणामहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ। विक्रेताको वेबसाइटमा लीराग्लुटाइड समिक्षा हेर्नुहोस् र कसरी विक्रेता संचालन गर्दछ। सबैभन्दा अनुभवी र सम्मानित लिराग्लुटाइड खरीद आपूर्तिकर्ता छनौट गर्दा तपाईंलाई गुणवत्ता सेवाहरूको साथै गुणस्तरीय मेडिकल उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। Liraglutide लागत एक विक्रेता को लागी अर्को फरक हुन्छ।
तपाई कुनै कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन जब तपाई Liraglutide लिनुहुन्छ यो कानुनी औषधि हो र राम्रो परिणामको लागि तपाईको औषधि सम्पूर्ण खुराक चक्रमा समावेश गर्नुहोस्।
काकेह, वाई, कांजी, एस, बुने, के।, र सट्टन, जे। (एक्सएनयूएमएक्स)। Liraglutide ute तीव्र तीव्र मिर्गौला चोट। फार्माकोथेरापी: मानव फार्माकोलजी र औषधि थेरापीको जर्नल, 32(1), E7-e11।
मार्सो, एसपी, डानिएल्स, जीएच, ब्राउन-फ्रेन्डसेन, के।, क्रिस्टनसेन, पी। मान, जेएफ, नाउक, एमए, ... र स्टीनबर्ग, डब्ल्यूएम (एक्सएनयूएमएक्स)। 2016 मधुमेह टाइपमा Liraglutide र हृदय परिणाम। औषधीको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, 375(4), 311-322।
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015)। एकाधिक दैनिक इन्सुलिन ईन्जेक्सनको साथ2मधुमेह टाइपको लागि उपचार गरिएको व्यक्तिहरूमा लिराग्लुटेड: अनियमित क्लिनिकल परीक्षण (MDI Liraglutide परीक्षण)। Bmj, 351, h5364।
डेभिस, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skj ,th, TV,… & DeFronzo, RA (2015) प्रकार2मधुमेह भएका बिरामीहरूमा तौल घटाउनको लागि लीराग्लुटाइडको प्रभावकारिता: एससीएएलई डायबिटीज अनियमित क्लिनिकल परीक्षण। जामा, 314(7), 687-699।